Yahoo hack သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူအကောင့်အားလုံးကိုထိခိုက်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
Yahoo hack ကသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူအကောင့်အားလုံးကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်
Yahoo ကလိမ်တာကိုမရပ်ဘူးအကယ်၍ မရရှိလျှင်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Yahoo သည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရသည် အသုံးပြုသူအကောင့် (၃) ဘီလျံအားထိတွေ့ခဲ့သည် သို့သော်ဖြစ်ရပ်များကိုမတိုင်မီနှင့်သုံးနှစ်မျှသာကြာသောအခါပေးအပ်သောကိန်းဂဏန်းမှာများစွာနိမ့်သောကြောင့်ယခုအချက်အလက်များကိုယခုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
မည်သူမျှ Yahoo ခံစားခဲ့ရသော hack မှလွတ်မြောက်ရန်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် Yahoo ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်ကြီးမားသောအချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုသည်ထိုအချိန်ကတက်ကြွသောကုမ္ပဏီ၏သုံးစွဲသူသုံးဘီလီယံကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဒါကဘယ်လို သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မကြာသေးမီက Verizon ကုမ္ပဏီမှ Yahoo ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ယခုနှစ်အစတွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် ထိခိုက်နစ်နာမှုအရေအတွက်သည်စုစုပေါင်းသို့မရောက်မှီအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးပွားလျက်ရှိသည်.
ပြ2016နာပေါ်လာသည့်အခါဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်သုံးနှစ်အကြာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးကိန်းဂဏန်းများသည်ထိခိုက်နစ်နာသောအကောင့်သန်း ၅၀၀ ကိုပြောခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲ Yahoo ကဒီ hack ကအကောင့် ၁ ဘီလီယံကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်ကအကောင့်စုစုပေါင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံပဲ။ ယခုအဖြစ်အပျက်အပြီးလေးနှစ်ကျော်အကြာတွင် Verizon မှအတည်ပြုပြီးသောနည်းပညာအသစ်နှင့်“ ပြင်ပမှုခင်းကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီဖြင့်” စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က Yahoo account အားလုံးအပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုသည် ပို၍ ဆိုးရွားသည်.
ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်သတင်းအချက်အလက်ပါဝင်သည်သတိရပါ အမည်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ မွေးနေ့၊ စကားဝှက်များအပြင်လုံခြုံရေးမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ နှစ် ဦး စလုံး encrypted နှင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့။ ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်အကောင့်များသို့မဟုတ်အကြွေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ဒေတာနှင့်ပတ်သက်။ , သူတို့ထိတွေ့သို့မဟုတ်မရှိမရှိလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Verizon မှပြောကြားရာတွင် Yahoo အဖွဲ့သည်လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သိသာသောအဆင့်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Yahoo hack ကသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူအကောင့်အားလုံးကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်